Ikhaya leholide "IL NIDO DEL eGaborano" - I-Airbnb
Ikhaya leholide "IL NIDO DEL eGaborano"
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enetreyini entle enolwandle oluhle kunye neendawo ezintle ezibonakala kakuhle ikwiimitha eziyi-100 ukusuka elunxwemeni kunye namatye kunye neemitha eziyi-800 ukusuka elunxwemeni lwesanti kunye nolwandle. I-Marina, iivenkile kunye neziko ledolophu zikude ngeemayile.
Iflethi ekumgangatho wokuqala wendlu encinci inetreyini enetafile yokutyela, iambrela neendawo zokutyela ilanga. Ngaphakathi kukho igumbi elikhulu lokuhlala elinetafile yokutyela nendawo yokuhlala. Amagumbi amabini okulala: elinye elinebhedi elala abantu ababini nekhabhathi enkulu. Igumbi lesibini elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela elinesinki yokuhlamba izandla, umatshini wokuhlamba impahla nendawo yokuhlamba. Ikhitshi elinesitovu segesi linefriji, izitya nezinto zebhedi.
Ikhaya leholide i-IL NIDO DEL eGaborano likunxweme olunamatye kunxweme lweCilentana phakathi kweCasalvelino Marina kunye nePioliday. Ikude ngeekhilomitha eziyi- yiPioliday, ilizwe apho ukutya kwaseMedithera kwenzelwe nguAncel Keys waseMerika.
Ndidibana neendwendwe zam xa zibhalisela ukufika, kodwa ndisoloko ndifumaneka ukuze ndicaciswe kwaye ndicaciswe.
Inombolo yomthetho: APSA000024-0019
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Casal Velino